नेकपा सचिवालय बैठकमा कुलमान पुनर्नियुक्तिको छलफल हुने : के होला निर्णय ? - Kantipath.com
नेकपा सचिवालय बैठकमा कुलमान पुनर्नियुक्तिको छलफल हुने : के होला निर्णय ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आज बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक ४ घण्टापछि सारिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको भन्दै बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सारिएको हो ।
आजको सचिवालय बैठकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल केन्द्रित हुनेछ । साथै बैठकमा बामदेव गौतम र युवराज खतिवडा मध्ये कसलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने भन्ने पनि निर्णय हुने छ ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ्गको पुनर्नियुक्तिको विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ । घिसिङ्गको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिदैछ । नेकपामा प्रचण्ड खेमा घिसिङ्गलाई फेरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली उनीप्रति खासै सकारात्मक छैनन् । घिसिङ्गलाई प्राधिकरणमा फेरी ल्याउनु पर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा व्यापक दबाब र अभियान चलेको छ ।
Previous Previous post: ४ घण्टाका लागि सर्‍यो नेकपा सचिवालय बैठक
Next Next post: भारतको तेलङ्गना राज्यमा कार दुर्घटना, ५ जनाकाे मृत्यु